Kolombia: Fetiben’ny zavakanto, tononkalo ary voninkazo tany Medellín · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2020 5:19 GMT
(Lahatsoratra tamin'ny volana Aogositra 2007)
Nanoratra momba ny famaranana ny Fetiben'ny Zavakanto MDE07 ireo bilaogera kolombiana, hetsika iray miezaka ny hamerina ny zavakanto maoderina ho amin'ny fifanakalozan-kevitra ao an-toerana sy hamerina izany ho an'ny fiainana andavanandron'ny olom-pirenena. Niresaka momba ny fetiben'ny Tononkalo Iraisampirenena sy ny Foaran'ny Voninkazo ihany koa izy ireo. Nandefa lahatsoratra feno momba ny MDE07 i Carlos Uribe de los Ríos ao amin'ny Equinoxio [ES].
Ny Hetsika Medellin 07 -ciudad + zavakanto maoderina- no hetsika ara-kolontsaina lehibe indrindra sy nanakoako indrindra tamin'ny taona (2007). Tsy isalasalana ny momba izany. Ary na dia nanomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny volana Janoary aza izy ary nifarana tamin'ny volana Jona dia nanjary karazana antso maika, famoronana ary marolafy ho an'ny mpanatrika ny ivony tamin'ny volana Aprily sy Mey izay sasa-niandry ary indraindray sanganehana momba ny sosokevitra. kanefa izany mihitsy no tanjona.
Nanazava i Jorge Montoya ao amin'ny Lo Cultural [ES]:
Zara raha jeren'ny fikambanana mikarakara hetsika tohanan'ny famatsiam-bolam-panjakana ireo mpanakanto mahaleontena ao an-tanàndehibe. Toa izany no hita ho fanehoan-kevitr'i Raúl Jaime Gaviria, talen'ny gazetiboky Asfódelo, momba ireo dingana natao hisafidianana ireo famokarana zavakanto izay handray ny sehatry ny MDE07, izay nilaza fa “miverimberina ny lesoka mitovy miseho amin'ny sehatry ny kolontsaina ary ny tena ratsy indrindra aza dia misy ny iharan'ireo lesoka ireo izay tsy iza fa ireo mpanakanto an-jatony izay nifanamby tamin-kerim-po tamin'ny famoronana, izay saika matetika miaina ao anatin'ny toe-javatra ratsy indrindra ary tena mahatsiaro ho faran'izay manirery ”.
Nanoratra i Álvaro Ramírez avy ao amin'ny Ojo al Texto:
Mbola mientanentana i Medellin taorian'ny MDE07 malaza. Etsy andaniny, mbola ao anatin'ny Fetiben'ny Tononkalo Iraisampirenena faha XVII isika manomboka ny 14 Jolay ka hatramin'ny 22 Jolay amin'ny fidirana maimaim-poana amin'ny hetsika rehetra.
Avy eo dia ho avy ny Foaran'ny Voninkazo izay ankoatra ny maha karazana karnavaly fanao isan-taona azy dia hisongadina amin'ny alàlan'ny fandraisany anjara amin'ny hetsika ara-kolontsaina toy ny Fetiben'ny Sarimihetsika V Colombian izay hatao ao anatin'ny Foaran'ny Voninkazo ary hatao ny 2 ka hatramin'ny 10 Aogositra amin'ity taona ity.
Handefa ny hetsika Fetiben'ny Voninkazo amin'ny aterineto ny JumpTV Latin America and the Caribbean [ES] ary misy ny fandaharam-potoana ao amin'ny bilaogin'izy ireo. Ho fanampin'izany, manana ny sarin'ny matso Silletero (mpitondra voninkazo) fanao isan-taona ihany koa i Luz Carvajal ao amin'ny pejiny, izay anazavany ny niandohan'ny fomban-drazana amin'ny fitondrana voninkazo sy ny fomba nanombohan'izy ireo tamin'ny fitondrana voninkazo miakatra sy midina ireo tendrombohitra mifatotra amin'ny seza ao an-damosiny ary miaraka amin'ny olona ihany koa. Nanehoana hevitra tao amin'ny bilaogy maro ihany koa ny Fetiben'ny Tononkalo Iraisampirenena ao Medellín:
Nandefa taratasy misokatra ho an'i Fernando Rendón, ilay bilaogera Nuevas Letras Harold Alvarado Tenorio, nangataka vaovao momba ny fitantanam-bola sy ny fandaminana momba ny fetiben'ny tononkalo, ary nitaky valiny momba ny làlana halehan'ny vola avy amin'ny mari-pankasitrahana sy ny loka. Ary nanoratra momba ny fanantenan'ny poeta Arzantiniana amin'ny Fetibe any Kolombia i Papelón con Limón.
Hoy i AQPDescubre [ES]:
Amin'ity taona ity, mankalaza ny Loka Nobel Alternative izay nomena tamin'ny volana Desambra 2006 ihany koa ny Fetibe ary, araka ny nolazain'i Franco [Gabriel Jaime Franco, talen'ny hetsika], dia midika fa fanamafisana ny filana fandriampahalemana ”. Midika izany, raha araka ny teniny, “fa hamafisin'izy ireo fa tsy maintsy hita io teny io mandritra ny dingan'ny fanovana ity firenena ity”. Nanome toky ilay poeta fa “nomena ny mponin'i Medellín izay nanao izany (fetibe) izany ho zava-dehibe ny loka”.
Hoy ihany koa i Poemas del Alma [ES] hoe:
Iray amin'ireo zavatra mahaliana indrindra ny fampisehoana angon-tononkalo ahitana tononkalo miisa 222 avy amin'ny firenena miisa 113, izay havoaka ho horonantsary ao amin'ny tranonkala YouTube.com. Nanazava i Rendón fa naharitra efa-taona ny asa, fotoana izay nandraisan'izy ireo horonantsary an-jatony ary nanitsian'izy ireo izany.
Sary avy amin'i Silletero nalaina tao amin'ny pejy flickr an'i SantiNaranjo.